Filipina: Dokambarotra kandidà ho filoham-pirenena amin’ny fahitalavitra · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 24 Novambra 2009 18:17 GMT
Vakio amin'ny teny Filipino, Español, Français, 繁體中文, 简体中文, বাংলা, English
Hisy fifidianana filoham-pirenena any Filipina amin'ny taona ho avy. Efa nanomboka ny fotoan'ny fifidianana amin'ny famenoana ireo antontan- taratasy filatsahana any amin'ireo biraom-panjakana manerana ny firenena.
Ho fanairana sy fampahafantarana ny mpifidy mikasika ny firotsahana ho fidiana manao fandaharana sy mandoa ny vola mifandraika amin'izany ireo mpifaninana ho filoham-pirenena. Sarimihetsika maro momba ireo mpilatsaka ho fidiana ireo no efa nandeha tamin'ny fahitalavitra nandritra ny volana vitsivitsy izay. Efa tafiditra ao amin'ny YouTube avokoa ireny fandaharana ireny.
Pinoy Picks! no namoaka ny lisitr'ireo mpilatsaka ho fidiana. Tsy afa-po amin'ny fanangonana ireo anarana ireo ny bilaogin'i Shalapog:
Rehefa mifoha ianao amin'ny maraina dia tsapanao fa mihamanakaiky ny fotoana. Hitanao izany eny an-dalana rehetra eny, amin'ny hirahira ao amin'ny radio, ny fahasahiranan'ny olona mijery ny lisitra sy mampiditra izany amin'ny dokam-barotra ao amin'ny fahitalavitra. Hita eo ireo… azo fidiana ho filoham-pirenena!
Fifidianana 2010, tsy dia mamparisika ahy loatra satria tsy mahafa-po ahy ireo mpilatsaka ho fidiana sy ny laharany ao amin'ny rejistra. Tsy dia mahay politika aho, na dia nianatra siansa politika aza tany am-pianarana. Na izany aza fantatro hoe hanao ahoana ny firenena miaraka amin'izay ho filoha manaraka eo.
Indreto ny fandaharana mikasika ireo mpilatsaka ho fidiana:
Manindry mafy ny amin'ny fanombohany amm-panetren-tena ny loholona Manny Villar :
Manao izay hampalaza azy ny loholona Chiz Escudero
Mila fahaiza-manao sy fahaizana ny governemanta hoy ny sekreteran'ny fiarovana, kandidan'ny fitantanana Gilbert Teodoro
Ny loholona Noynoy Aquino, zanaka lahin'ny filoha, no manao sary mihetsika miaraka amin'ny mozika tsara indrindra
Ny filoha teo aloha Joseph Estrada milatsaka ho fidiana indray ao ambadiky ny fivarotana fanafody artrita
Scholar Danny Arao no mandinika ireo fandaharana ireo:
Mody jerena matanjaka ara-batana izy ireo kanjo tsy ampy hery. Na dia manan-kevitra tsara ny hanova zavatra aza izy ireo dia tsy hahavita izany ao anatin'ny fotoana raha ny zava-misy amin'izao fotoana izao.
Misy koa ireo milaza fa miezaka manao izay hampalaza ny tenany fotsiny ireo mpilatsaka ho fidiana ireo, kanefa tsy ho mora leo aza ve ny olona raha izao sahady izy ireo dia miresaka olana manokana tahaka ny hoe fanitsakitsahana zon'olombelona sy ny tsy fahampian'ny fanovana?
Barrio Siete tsy tia politika
Halako ny resaka politika. Raha ny hevitro dia fandaniam-bola fotsiny izany. Tiako izay kandida mandany ny volana amin'ny zavatra ilain'ny tsy manana.
Hatramin'izao aloha dia tsy mbola manana kandida tohanana aho. Mbola sahirana mijery izay kandida mifanaraka amin'ny eritreretiko aho. Alefa ny fandaharana politika, miaraka amin'ny tarigetrany mampahafantatra izay hofidiana, raha misy anankiray fotsiny, kanefa ny endriny sy ny tarigetrany dia ny hampahafantatra ny tenany fotsiny hoe milatsaka ho fidiana, ataoko fa tsy mety izany.